mainNews – Page 375 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
टी–२० एसिया कपमा नेपाल पहिलो खेलमै पराजित
काठमाडौं । थाइल्यान्डमा सुरु भएको टी–२० एसियाकप क्रिकेटमा नेपाल पहिलो खेलमा नै पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ । शनिबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल टेस्ट राष्ट्र पाकिस्तानसँग ९ विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो । बैंककमा नेपालले पाकिस्तानसामु प्रस्तुत गरेको ४८ रनको झिनो लक्ष्य पाकिस्तानले मात्र १० ओभरमा १ विकेट गुमाएर भेट्टायो । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको […]
क्रान्तिकारी माओवादीको सूर्योदय नगर समिति गठन
इलाम । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले संगठन पुर्नगठन एवं विस्तार कार्यलाई द्रुत रुपमा अघि बढाएको छ । सोही क्रममा इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगर समिति गठन भएको छ । सूर्योदय नगरपालिकाको सभाहलमा भएको एक भेलाले टेकबहादुरर नेपालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय नगर समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यहरुमा कमल रिजाल, तोयानाथ घिमिरे, कृष्ण रिजाल, सुवास तामाङ, […]
क्यूवाका कम्युनिष्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रोको निधन
काठमाडौं । क्युवाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । क्युवाको सरकारी टेलिभिजनले उनको निधनको पुष्टि गरेको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । क्यास्ट्रोलाई क्यूवामा कम्युनिष्ट क्रान्तिका नायक मानिन्छ । फिडेल क्यास्ट्रोले करिब आधा सताब्दी क्युवालाई एक पार्टी पद्धतिमा चलाए । उनले सन् २००८ मा भाइ राहुल क्यास्ट्रोलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । […]
सावधान ! तपाईको मोबाइलको डाटा सेकेन्डमै चोरिएला
एजेन्सी । तपाईले संसारका केही चर्चित सेलिब्रेटीका गोप्य दस्तावेजदेखि नग्न तस्बिरहरु समेत चोरी भएको थाहा पाउनु भएको छ । कतिपय अवस्थामा त प्रश्न उठ्छ कि यस्ता सामग्रीहरु कतै आफै लिक गराएका त हैनन् ? तर संसारका कुनै ह्याकिङ कम्पनीका कर्मचारीलाई लक लागेको स्मार्टफोनबाट डाटा निकाल्नका लागि सेकेण्डको सयम काफी हुन्छ । इजरायलको कम्पनी सेलेब्राइटको टेक्नोलोजी […]
एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै
काठमाडौं । थाल्याण्डमा सुरु टी–२० महिला एसिया कपमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । गत असोजमा हङकङमा भएको आइसीसी महिला विश्वकपअन्तर्गत एसिया छनोटमा दोस्रो भएपछि नेपालले एसिया कप खेल्ने अवसर पाएको हो । थाइल्याण्डको बैंककस्थित टर्ड थाई क्रिकेट स्टेडियममा हुने पाकिस्ताविरुद्धको खेल नेपालका लागि चुनौति पूर्ण हुनेछ । नेपाली महिला टोलीले एसियाली स्तरमा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा […]
अध्यक्ष किरणद्वारा पुनप्रति समवेदना व्यक्त
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य नीलबहादुर पुनकी आमा प्राथना पुनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । बागलुङ बुर्तिबाङ तिबाङ्ग निवासी पार्टी शुभचिन्तक ९९ वर्षीय पुनको मंसिर ४ गते निधन भएको हो । अध्यक्ष किरणले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनको निधनप्रति श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्दै शोकसन्तब्ध परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका हुने ।
संविधान संशोधनको नाममा मुलुकलाई सिक्किमीकरण गरिदैछ : गजुरेल
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सिपी गजुरेलले संविधान संशोधनको नाममा सत्तारुढ पार्टीहरुले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार पार्टीको नेवा राज्यले शुक्रबार दिउसो काठमाडौंको रत्नपार्कमा आयोजना गरेको विरोध ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै नेता गजुरेलले भने, “संविधानलाई संशोधन गरिदैछ । यो मुलुकमा अर्को राष्ट्रघात […]
संविधान खारेजीको माग गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीले गर्यो देशैभर विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले शुक्रबार देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संविधान संशोधनले देश र जनताको समस्या हल नगर्ने भन्दै वर्तमान संविधान प्रतिगामी र जनविरोधी रहेकोले यसको खारेजी गरी जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान जारी गर्न अर्को आन्दोलनको उठान गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् । पार्टीको नेवा राज्यको आयोजनामा काठमाडौंको रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा भएको कार्यक्रममा […]